အလှဆုံး Trekking/Hiking လမ်းများ - LODGGY
Trekking ပဲပြောပြော၊ Hike လုပ်မယ်ပဲ ပြောပြော သဘာဝ ရှုခင်းတွေထဲ မျောနေရတာတော့ မကြိုက်မဲ့သူမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ Adventures ကို ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားတဲ့ အရသာအသစ် အဆန်းလေးရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့ပြထဲမှာနေရတာ ကျဥ်းကျပ်လို့ ရှုခင်းကျယ်တွေ မြင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Trekking/Hiking သွားဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် သွားချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာတွေသွားမလဲ?
မြန်မာမှာ Trekking လုပ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ တစ်ကယ့်ကို အများကြီးမှ အများကြီး ရှိပါတယ်။ Trekking လုပ်တဲ့အခါ နေ့ချင်းပြန် Day Trip Trekking တွေလဲ ရှိသလို ကလော – အင်းလေး လိုမျိုးကို ကြားက ရွာလေးတွေမှာ တည်းပြီး သွားရတဲ့ ရက်ရှည် Trekking တွေလဲ ရှိပါတယ်။ Trekking ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုက် သင့်တော်ရာရွေးပြီး ခရီးသွား ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၁ ခါလောက်တော့ စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ Adventure Activity လေးတစ်ခုပါ။
ကဲ…. Trekking ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သွားရင်ကောင်းမလား၊ ဘာလားတွေဝေနေရင်တော့ အောက်က မြန်မာမှာ Trekking သွားရင်းတွေ့ရမယ့် အလှပဆုံးသော ရှုခင်းပုံတွေသာဝင်ကြည့်ပြီး ဘယ်တော့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပြောင်းမေးဖို့ပဲ ပြင်လိုက်တော့်နော်…
Kalaw – Inle Lake/Pindaya
Kalaw to Lake Inle trek, part two 🇲🇲 #myanmar🇲🇲 #myanmartourism #travelgram #myanmarburma #myanmartrip #kalaw #inlelake #kalawtrekking #trekking #myanmargirl #instatravel #wanderlust #kalawtoinlelake #seasia #potd #justgoshoot #burmese
A post shared by Sonia (@doctorwooof) on Feb 5, 2020 at 11:06am PST
Kalaw Scenery [Image by Madeline O]
ကလော ဘက်ကတော့ Trekking အထွက်များတဲ့ နေရာပါ။ Kalaw View Point လိုမျိုး အနီးအနားလေးကို ပဲ Day Hike လေးလုပ်လို့ရသလို၊ အင်းလေးကန် (သို့) ပင်းတယ ဘက်တွေလဲ ရက်ရှည် Trekking ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ မြင်ကွင်းတွေကတော့ မြေနီ တောင်ကုန်းလေးတွေ၊ စိုက်ချင်းလေးတွေ ရောယှက်ထားတဲ့ အလှပါ။ ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး မြို့ထဲမှာ အမြဲ သွားလာနေရတဲ့ သူတွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်မဲ့ ရှုခင်းပါပဲ။
It’s great to be able to shareabirdseye view with the villages we work with, like this Shan community that has become likeasecond home these past several years. • • • #lashio #lashioisthe8 #dronestagram #djimavicpro #dji #shanvillage #taiculture #ricepaddy #droneworld #beautifulseasia #wonderofasia #tlpicks #traveldeeper #intravelist #sustainabletravel #ecotourism #adventuretravel #myanmar #shanstate
A post shared by MAObyron (@maoutfitters) on Sep 4, 2019 at 10:15pm PDT
ရှမ်းပြည်ဘက်မှာက မြင်ကွင်းလှတွေမရှားပါဘူး။ လားရှိုးဘက်က ရှုခင်းတွေကလဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံထားခြားနေပါတယ်။ အင်းလေးဘက် Trekking သွားသလိုမျိုး တောင်ကုန်းလေးတွေ အစား ပိုမြင့်တဲ့ တောင်တန်းလေးတွေက အစားထိုးထားပြီး တောင်ကြားက စိုက်ခင်းမြေပြန့်တွေနဲ့ Contrast ၂ ခုပေါင်းထားတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတစ်မျိုးပါ။
နောက်ထပ် စိမ်းစိမ်းစိုစို မြင်ကွင်းလေးတွေ ပေးနိုင်မဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ လွိုင်ကော်ဘက်မှာတော့ Soft Trekking လေးတွေများပြီး ကယန်းရွာလေးတွေကို သွားလည်ပတ်ရတာ၊ မြိုးအနီးတစ်ဝိုက်ဘက်မှာ ရှုခင်းလှလှနဲ့ Day Trekking လေးတွေ အသွားများကြတာပါ။ နောက်ပြီး လွိုင်ကော်ဘက်မှာ ရေတံခွန်တွေနဲ့ ကန်တွေနဲ့ဆိုတော့ သူရဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေကလဲ တစ်မျိုး Feeling ပေါ့.
View von Mount Zwekabin in Hpa-an Myanmar !! Der Aufstieg hat uns ca.2Stunden und einige Flaschen Wasser gekostet, bei der Sonne hier, aber es hat sich gelohnt 😊🙏. Es ist so schön hier! Und man hätte sogar auf dem Berg übernachten können, was bei uns leider zeitlich nicht gepasst hat. Kann den Aufstieg aber nur empfehlen! Haltet durch, oben gibt es Wasser und Curry 😄✌️ #myanmar #myanmartravel #zwekabin #hpaan #reisen #travel #unterwegs #travelpassport #travelpassion #landschaft #ausblick #berge #pagoda #clouds #fotografie #photography #photoftheday #instatravel #ltaclub #vlog #vloglife #vlogger
A post shared by How you can travel the world! (@whatsnext.reisen) on Oct 17, 2016 at 8:39am PDT
ဘားအံဘက်မှာလဲ အေးဆေးနဲ့ နေ့ချင်း Hiking လေးလုပ်လို့ ရမယ့်နေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ အဲအထဲကမှ ဇွဲကပင်တောင်က ရှုခင်းနဲ့ တောင်ဝိုင်းရှုခင်းတွေကတော့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်။‌ တောင်ခြေတွေထိ ကား၊ဆိုင်ကယ် တွေရောက်တယ်ဆိုတော့ အရမ်းကြီး Heavy မဖြစ်ပဲ အေးအေးဆေးဆေး Hike သွားလို့ ကောင်းပါတယ်။
ကဲ, သင်တို့ရော ခရီးတွေပြန်သွားလို့ရတဲ့ အခါ Trekking/Hiking သွားဖို့ စိတ်ကူးရှိလား? ဘယ်သွားမယ်စိတ်ကူးလဲ?